प्रधानमन्त्री ओलीले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको गरेको २४ घण्टा नबित्दै आज देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र उत्पन्न परिस्थिति तथा भावी दिशाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता पवित्र उद्देश्यले गरिएपनि प्रचण्डको उद्देश्य खराब देखिएको बताएका छन् । बालुवाटारमा आफुपक्षीय निवर्तमान सांसदहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुको उद्देश्य पार्टी एकतापछि कब्जा गर्ने उद्देश्य रहेको बताएका हुन् ।
‘पार्टी एकता पवित्र उद्देश्यले गरेको हो । तर उहाँहरुको नियत खराब रहेछ । पार्टी एकतापछि कब्जा गर्ने रहेछ । पार्टी कब्जा गरेपछि सत्ता हत्याउने योजनामा लाग्नुभयो’, ओलीको भनाइ उधृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘सरकारले राम्रा काम गर्दा पनि प्रचार गर्नुको साटो विरोध मात्रै गर्नुभयो । आफ्ना अनलाइनहरुलाई समाचार लेखाउनतिर लाग्नुभयो ।’
त्यस्तै ओलीले पार्टीकै नेताहरुले सरकारका विरुद्धमा समाचार लेखाएको आरोप समेत लगाएका थिए । ‘म केपी ओली हुँ । प्रचण्ड भन्दा १० वर्ष पहिला पार्टीमा लागेको हुँ । तर मलाई अहिले पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने रे ?,’ ओलीको प्रश्न थियो । उनले आफ्नै कारण जनमत आएर पार्टीले झण्डै दुइतिहाइ ल्याएको समेत दावी गरेका थिए ।
संसद भङ्ग गर्नुपर्ने कारणबारे प्रस्टयाउदै ओलीले भने- ‘आफै ओलीलाई छोडे भन्ने अनि आफै होइन मलाई नै चाहिन्छ भन्ने यो कस्तो तरिका हो ? आफु प्रधानमन्त्री हुने अनि राष्ट्रपति झलनाथलाई बनाउने यो सब योजना र षड्यन्त्र बुझेर मैले यो कदम चाल्न बाध्य भएको हुँ।’ भेलामा प्रचण्ड नेपाल पक्षले राखेका कुनै पनि भेलामा नजान ओलीले निर्देशन दिएका थिए ।
उनले सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन् । विभिन्न बहानामा सरकारलाई झुलाउने काम भएकाले ताजा जनादेश प्राप्त गर्न नयाँ निर्वाचनमा जानु परेको पनि बताए । ‘तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकतामा पनि प्रचण्डले सिन्को भाँच्न सकेनन् । सरकारको काममा पनि एकपछि अर्को गर्दै अड्चन ल्याएर काम गर्नै दिएनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।
ओलीले पार्टीभित्रैबाट भएको असहयोग र सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई लिएर जनतामाझ जान भेलामा सहभागी सांसदहरुलाई आग्रह गरे । उनले सरकार गठन भएको केही समयदेखि नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने हरेक कदममा ब्यक्तिगत स्वार्थ तेस्र्याएर पाइला छेक्ने प्रयास भएको बताए ।
‘एकतापछि पार्टीको सचिवालयका ७५ वटा सचिवालय बैठक भए, कुनै बैठकमा पनि देश, जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उहाँहरु कहिल्यै राजी हुनु भएन, मेरा मान्छेलाई खोई, मलाई खोई, उधारो होइन हाताहाती चाहिन्छ भन्ने उहाँहरुको स्वार्थपूर्तिले घेरिनु पर्‍यो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जस्तोसुकै दुश्प्रचारको सहारा लिए पनि जनताले यो कुरा बुझेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चुनावी तयारी गर्न निर्देशन पनि दिए । ‘तपाईंहरु अब निर्वाचन क्षेत्र जानुहोस्, हामीले गरेका अभूतपूर्व कामहरुलाई रोक्न भएका षडयन्त्रबारे जनतालाई बुझाउनुहोस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कसले काम गर्‍यो, कसले काम गर्न अवरोध गरेर षडयन्त्र तिकडम मात्र गर्‍यो, जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै भेलालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले ओलीको नेतृत्वमा अब उदाहरणीय विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने बताएका थिए । भेलालाई पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको भेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सांसदहरु रघुवीर महासेठ, कृष्णप्रसाद दाहाललगायत भने अनुपस्थित रहेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने भेलामा सहभागी भएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पक्षका ७ मन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएका थिए । पूर्वमाओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।
पूर्वएमालेलाई ब्युँताउने सम्भावना
ओलीले आफूनिकटका सांसदहरुको भेलामा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि प्रश्न गरे– एमालेको अध्यक्षलाई कारवाही गर्ने ? प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमपछि अब उनले पूर्वएमालेलाई ब्युँताउने सम्भावना बढेको छ । बालुवाटारको उनको अभिव्यक्तिले पनि एमाले ब्युँतिने संकेत गरेको छ ।
विगतमा सीपी मैनालीले नेकपा माले ब्यूँताएजस्तै अब ओलीले एमालेको पुनर्जन्म गराउने सम्भावना बढेको हो । ओलीनिकट केही कार्यकर्ताहरुले यस अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गरिसकेका छन् । ओलीकै निर्देशनमा नै दर्ता भएको भनिएको नयाँ एमालेले सूर्य चिन्ह पाउने सम्भावना छैन ।
यो स्थितिमा अब ओलीले नेकपाको नामबाट नभएर नेकपा एमालेकै नामबाट निर्वाचन लड्ने सम्भावना बढी रहेको नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि नेकपाले पाएको सूर्यचिन्ह चाहिँ ओलीले प्राप्त गर्न गाह्रो देखिन्छ । किनभने, पार्टीको बहुमत हिस्सा ओलीसँग रहने छैन र प्रचण्ड–माधव समूहसँगै रहनेछ । यद्यपि निर्वाचन आयोगलाई दबाव र प्रभावमा पारेर ओलीले सूर्य चिह्न लिने कोसिस भने गर्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा ओलीले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारामा भोट मागेका थिए । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीमा ओलीले लिएको दृढ अडानका निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाएको थियो । त्यही म्यान्डेटको जगमा ओली प्रधानमन्त्री भए । तर, पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै उनले संसद भंगको घोषणा गरेका छन् ।
अब ओली के नारा र एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा जालान् ? उनको आफ्नो कदमको कसरी बचाऊ गर्लान् ? संसद विघटनको औचित्य सावित गर्न उनलाई निकै कठिन पर्ने देखिन्छ । नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने अब केपी ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही हुने बताउँछन् ।
ओली कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्यसमेत रहन अयोग्य देखिएको नेता नेपालको तर्क छ । कारवाही परेको व्यक्तिले पूर्वएमाले ब्युँताएर केही पार नलाग्ने नेता नेपालको भनाइ छ ।
एक अन्तरवार्तामा बरिष्ठ नेता नेपालले भनेका छन्, ‘विघटित भइसकेको पार्टी ब्युँतिने कुनै सम्भावना नै हुँदैन । त्यसोभए त्योभन्दा पहिलेको मालेलाई ब्युँताइदिए के हुन्छ ? त्योभन्दा पहिले कोर्डिनेशन केन्द्रलाई ब्युँताइदिए के होला ? त्योभन्दा पहिले झापा जिल्ला कमिटीलाई ब्युँताइदिए के होला भन्नुहोला, त्यसको कुनै अर्थ छैन ।